UNgidi ubheke ukukhuza ibuya kumaProteas
ULUNGI Ngidi umshwibi wamaProteas useluleme kwi-Covid-19 njengoba esefakiwe eqenjini elizodlala ama-test ne-India Isithombe: BACKPAGEPIX
UMSHWIBI weqembu lakuleli lesizwe lekhilikithi, uLungi Ngidi, uhlose ukubuya ngomfutho eqenjini amaProteas ngemuva kokuhlala isikhathi eside engadlali.
UNgidi (25) ufakiwe eqenjini elizotholana phezulu ne-India ochungechungeni lwemidlalo emithathu yama-test oluzoqala zingu-26 kwephezulu.
Wayefakiwe nasesikwatini semidlalo yosuku olulodwa (ODI) esasizobhekana neNetherlands kodwa wahoxa ngemuva kokutholakala ne-Covid-19 ngasekupheleni kwenyanga edlule.
Uchungechunge lwama-ODI lwamaProteas neNetherlands lugcine luhlehlisiwe kusasele imidlalo emibili ngenxa yokuqubuka kwegciwane leCovid lohlobo i-Omicron kuleli.
UNgidi akasichithanga isikhathi esiningi enkundleni selokhu agcina ukudlalela amaProteas ebhekene ne-Ireland koweT20 ngoJulayi.
Unqume ukungadlali emqhudelwaneni i-The Hundred e-England ngemuva kokusayina neqembu i-Welsh Fire futhi akazange abonakale ochungechungeni lwe-Sri Lanka ngenxa yezizathu ezithinta yena ngqo.
Ubeyingxenye yeqembu leChennai Super Kings elinqobe i-Indian Premier League kulo nyaka kodwa akazange abambe iqhaza elikhulu. Uze waphela lo mqhudelwano esadlale imidlalo emithathu kuphela.
Noma kunjalo wafakwa eqenjini lama-Proteas leNdebe yoMhlaba ye-T20 e-United Arab Emirates, wangadlala nowodwa umdlalo kulo mqhudelwano.
"Bengiyibheke ngabomvu imidlalo yethu neNetherlands futhi bengilangazelela ukubuyela enkundleni, ngeshwa ngahaqwa yiCovid," kusho uNgidi kwi-ESPN Cricinfo.
"Usuku lwesine nolwesihlanu cishe kwakuyizinsuku ezaba nzima kimina kodwa ngaphandle kwalokho, kwakungekubi kangako. Ukugula akungibuyiselanga emuva, empeleni kufane nokuthi bengiphumule isikhathi esingangesonto.
“Ngo-2019 ngaba nonyaka omuhle kodwa kwenzeke okuhlukile kulo nyaka njengoba ngingakadlali kakhulu. Ngingathanda ukubuyela kule fomu ebengikuyo phambilini.
"Okumqoka ukuthi ngibuyele enkundleni futhi ngizimisele ukuthi uma ngithola ithuba ngilisebenzise ngendlela efanele.
"Ngeke kube lula ngoba sinenqwaba yabadlali abaphambili eqenjini lesizwe kodwa kuyangikhuthaza ukusebenzisana nokubanga ijezi nabo."
Ama-Proteas azodlala ama-test amathathu ne-India. Amaphuzu azowathola azongena kwisizini entsha ye-ICC World Test Championship. UNgidi uthe kubalulekile ukuthi balunqobe lolu chungechunge ukuze bazibeke endaweni enhle kwi-log.
"Njengoba sike sabona phambilini, yonke imidlalo yethu ne-India ihlale isezingeni eliphezulu, ikakhulukazi uma uqhathanisa abashwibi bamaqembu womabili. Silindele enye inselelo efanayo," kuqhuba uNgidi.
"Ngicabanga ukuthi kufanele sikhethe abadlali abazohambisana nazo zonke izimo okumele sizibhekisise ngaphambi kokuqoka iqembu elizongena enkundleni.
"Ngokubona kwami abadlali bethu ababhethayo bajwayele kangcono ukudlala ezinkundleni ezifana neWanderers neSuperSport Park.
“Kufanele sizimisele, sidinga ukuqala kahle ngoba ngonyaka ozayo sizobhekana neNew Zealand ne-England. Sizodlala namazwe ahlonishwayo kuma-test. Kuzosisiza ukuqala kahle ne-India."
Umdlali wamaProteas obhethayo aphinde abe yi-wicketkeeper, u-Quinton de Kock, kungenzeka angawudlali umdlalo wesithathu njengoba ingane yakhe yokuqala kulindeleke ukuthi izalwe ngoJanuwari.